Ny toerana dia firenena any an-danitra, isika eo amin 'ny toe-tsaina dia afaka hita eto amin'ny lavitra.
Fa Jesosy no mpanamory tao an-tsambo, ary na dia eo aza mizaha toetra ny onja avo, rehefa any an-danitra ny asa tanana seranana.
Ny mpino matetika Toy tantsambo mandeha manerana ny ranomasina ny fiainana, teny an-dalana ho any amin'ny seranana any an-danitra.
Ary tamin'ny sambo, nisy taloha ny tily, ny tantsambo, izay nibanjina avy ambonin'ny ranomasina. Ary nipetraka teo am-harona teo an-tampon'ny andry tokana ny, manify tamin'ny masolavitra roa izay afaka hahitana raha nanatona ny sambo tany. Ny zavona sy ny zavona mety ho sarotra matetika ny mahita ny drafitra ao amin'ny firenena izy ireo ny sasin-tenin'ny.
Isika izay efa nandray an'i Jesosy avy nita ny Ranomasin'i fiainana izay matetika fahavinirana sy ny rivo-doza ny ranomasina dia marokoroko. Ny toerana dia firenena any an-danitra, isika eo amin 'ny toe-tsaina dia afaka hita eto amin'ny lavitra. Fa Jesosy no mpanamory tao an-tsambo, ary na dia eo aza mizaha toetra ny onja avo, rehefa any an-danitra ny asa tanana seranana.
Hoy ny Baiboly ny olona izay niandrandra fatratra firenena tsara kokoa noho ny eto an-tany. Ao amin'ny Hebreo. 11: 13-14, 16, vakintsika momba izany: Verse 13:
"Tamim-pinoana ireo rehetra ireo maty tsy nandray izay efa nampanantenaina. Izy ireo vao nahita azy mihitsy teo amin'ny lavitra, ka nino izy sy niarahaba azy io, ary nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany. "
Ireo olona ireo no mpanao fivahiniana masina izay nahita manomboka no ho miakatra - ao ny lavitra. Izy ireo any an-danitra efa nahita ny tany lavitra, ka niaiky ny firenena eto an-tany tsy an-tanindrazany. Ny mahaliana dia ny any an-danitra, izay nisy feo avy tao amin'ny lavitra. Fa noho ny mety maty, dia tsy afaka ny faniriana tanjona. Andininy faha-14:
"Ho an'ireo izay milaza izany dia mampiseho fa izy ireo dia mitady ny tanindrazana."
Izany hoe izy ireo nitady firenena hafa, firenena tsara kokoa noho ny olona dia tonga avy. Mety tsy midika hoe misy firenena hafa any an-danitra noho ny firenena, izy ireo tadiavinao. By ny teny sy ny asa ny ainy efa nampiseho fa vahiny eto amin'ity tontolo ity. Andininy faha-16:
"Fa ankehitriny kosa izy ireo maniry tsara lavitra firenena, any an-danitra. Noho izany Andriamanitra dia tsy menatra hatao hoe Andriamaniny, satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo Izy. "
Ny lanitra dia voaomana ho 'Andriamanitra rehetra ny olona masina talohan'ny-pahavitany ny fivahiniana masina eto an-tany. Ny Andriamanitra dia nifidy ho tia sy hanompo no Andriamaniny.
Abrahama dia niandry ihany koa ny firenena tsara kokoa:
"Fa niandry ny tanàna izay misy fanorenana izy,-marika sy Mpanao izany Andriamanitra" (Heb. 11:10).
Ao amin'ny fandikan-teny hafa:
"Noho izy niandry ary tian'izy sy amim-pahatokiana."
I Abrahama nandeha ny selestialy sy mandrakizay tanjona. Niaina ny fiainany rehetra ao amin'ny tanàna kely vonjimaika. Vonona ny hanao izany, araka izay niandry ny tanàna izay misy fanorenana. Ny fironana dia ny zavatra maharitra, tsy toy ny nifindrafindra monina velona izy, izay nipetraka tao an-dainy. Tsy manantena ho any an-tanàna rehetra teto an-tany, fa ny iray fa Andriamanitra no nanorina. Fototry ny tany dia miovaova sy tsy azo antoka, fa ny tanàna izay niandry Abrahama naorina tamin'ny fanorenana mafy, izay tsy mety ho hozongozonina.
Ho an-tanàna, isika eny an-dalana, dia manana ny zom-pirenena any an-danitra. Tsy mijery ny alahelonao sy mialoha ny fotoana ny Ambasadaoro any an-danitra, i Jesosy dia ho avy ka hitondra antsika any.
Vecka 30, söndag 1 augusti 2021 kl. 08:34